Madaxweynaha Puntland oo xilkii ka qaaday agaasimihii la dagaalanka burcadbadeeda ee Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo xilkii ka qaaday agaasimihii la dagaalanka burcadbadeeda ee Puntland
March 19, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Aagaasimihii xilka lga qaaday ee la dagaalanka burcadbadeeda ee Puntland Cabdirisaaq Maxamed Dirir. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa xilkii ka qaaday agaasimihii la dagaalanka burcadbadeeda ee Puntland Cabdirisaaq Maxamed Dirir sidoo kale loogu yeero “Ducaysane”, sida ay tilmaamayso digreeto kasoo baxday madaxtooyada oo ku taariikhaysan 19-ka Maarso, 2017-ka, sida uu arkay warsidaha Puntland Mirror.
Xil ka qaadista ayaa timid hal asbuuc kadib markii burcadbadeeda Soomaaliya ay afduubteen markabkii kowaad oo ganacsi muddo shan sanno ah, inkastoo maalmo kadib ay sii daayeen.
Agaasimaha xilka laga qaaday ayaa ahaa agaasimiha la dagaalanka burcadbadeeda ee Puntland tan iyo sanadkii 2009-kii.
January 15, 2017 Kalafadhigii kowaad ee golaha deegaanka cusub ee Dangorayo oo furmay
Mogadishu-(Puntland Mirror) Four fighters of Al-Shabab militant group were killed in U.S. airstrike in southern Somalia. The strike occurred about 74 miles northwest of Mogadishu on Thursday, the U.S. military’s Africa Command said in a [...]